Qaar kamid ah Xildhibaanada ka soo jedda Somaliland oo DFS edeyeey – Radio Daljir
Qaar kamid ah Xildhibaanada ka soo jedda Somaliland oo DFS edeyeey
Luulyo 20, 2019 4:08 b 0
Qaar ka mid ah xildhibaanadda kasoo jeedda degaanada maamulka Somaliland ee ku jira labadda aqal ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyay Madaxda Sare ee dalka oo ay ku eedeeyeen in ay Cunaqabateyn saareen maamulka Somaliland.
Xildhibaanadda ayaa beeniyay hadalkii ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ee ahaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay fasaxday Markabkii ku xayirnaa Dekedda Jeddah ee Xoolaha siday.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanadda Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu cunaqabateyn saaray maamulka Somaliland tan iyo markii la doortay.
Waxaa uu sheegay in dhammaan dowladda dhexe ee Soomaaliya ay burburisay heshiisyaddii ay horay u wada gaareen maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Xildhibaanadda ayaa xusay in aysan jirin door ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku leedahay hanaankii lagu siidaayay Markabkii xoolaha siday ee ku xayirnaa Boqortooyadda Sacuudi Carabiyah.
Musharrixinta Jubbaland oo ka soo horjeestay Guddiga doorashooyinka Jubbaland (Daawo)
Saaka & Dunida iyo Maxamed Xasan Dhallo, Daljir Garoowe (dhegayso)